10 Zava-pisotro misy alikaola hanandrana manerantany | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Zava-pisotro misy alikaola hanandrana manerantany
Train Travel Belzika, Train Travel China, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Portugal, Fiaran-dalamby Spain, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Train Travel UK, Travel Europe
Recipe miafina, tsiro mitsoka saina, ary tena misy alikaola, izao tontolo izao bara tsara indrindra ary ny klioba dia manompo ireo 10 zava-pisotro misy alikaola tsy maintsy andramana. Avy any Chine ka hatrany Eropa, ny sasany amin'ireo 10 zava-pisotro misy alikaola hanandrana izao tontolo izao dia zato taona vitsivitsy. Na izany aza, malaza be ry zareo, ary misotro zava-pisotro na 2, amin'ny fialantsasatrao dia traikefa tsy tokony hotadiavina.
1. Zava-pisotro misy alikaola hanandrana manerantany: Aperol Spritz Italia
Cocktail miorina amin'ny divay, Aperol Spritz dia matsiro ary ny akora ao anatiny dia hitombo amin'ny fatra marina alohan'ny hahatongavan'ireo fampianarana lehibe. Spritz dia aperitif malaza malaza any Italia avaratra, voalohany tany Venise. Ny spritz dia fifangaroan'ny Campari, prosecco, sy rano soda, amin'ny ranomandry, noho izany dia mety amin'ny famelomana azy fialantsasatra fialantsasatry ny tanànanao.
Azo inoana fa ho hitanao ilay zava-pisotro miloko volomboasary amin'ny vera feno divay, amin'ny latabatra fisakafoanana rehetra any Italia. Aperol spritz dia mamelombelona sy tonga lafatra amin'ny andro fahavaratra mafana, noho izany dia tsy maintsy manandrana an'io zava-pisotro misy alikaola io ianao rehefa misakafo any Italia.
2. Lavitr'i Frantsa
Rehefa voarara ny 100 taona maro tany Frantsa, mahazo laza indray ny Green Fairy. Io zava-pisotro misy alikaola maitso io dia nankafizin'ny mpanoratra sy mpanakanto Parisis tao 19-20faha taonjato, any Montmartre ny ankamaroany. Absinthe dia iray amin'ireo 10 zava-pisotro misy alikaola mahery indrindra hiezahana manerantany.
ankehitriny, afaka manana tifitra absinthe ianao, fa tifitra fotsiny satria ity zava-pisotro ity dia mahery be, any amin'ny bara maro any Paris. La Fee Verte, Lulu White, Cafe L'Absinthe, dia vitsivitsy amin'ireo toerana tsara indrindra ahafahanao manandrana zava-pisotro misy alikaola mahery indrindra eto an-tany. Na izany aza, ny akora fototra izay ho hitanao amin'ny endrika absinthe rehetra dia anis, voninkazo wormwood, ary fennel mamy.
Tsy fantatrao angamba fa ny "Sangria" dia avy amin'ny teny hoe "Sangre", ra, amin'ny Espaniôla. Tsy misy tokony hampanahy ny momba ireo zava-pisotro misy alikaola ity, io anarana manokana io dia tsy milaza afa-tsy ny loko mena matanjaka. Tsy misy tsara noho ny kapoakan'i Sangria amin'ny tolakandro miaraka amin'ny lovia Paella.
Ny Romana no voalohany namorona Sangria tamin'ny voaloboka tamin'ny Moyen Âge. Ny zava-pisotro voaloboka dia nanjary zava-pisotro misy alikaola malaza taorian'ny alikaola kely hanakanana ny bakteria. Ny sangria nentim-paharazana dia vita tamin'ny voaloboka Tempranillo, lehibe tao amin'ny faritra Rioja, Espaina. Na izany aza, azonao atao ny manandrana ity fisotro misy alikaola matsiro ity na aiza na aiza ao Espana sy Portugal.
Toerana vitsivitsy atolotra miaraka amin'ny Sangria tsara indrindra any Barcelona: cava sy Sangria mena ao Arcano, pasteky miaraka amin'i Sangria ao amin'ny Tickets.
Tonga tany Angletera voalohany avy any Holland tamin'ny taonjato faha-18 ny gin. Ny antony dia Gin dia vita amin'ny voaroy, ka Gin dia zava-pisotro mifototra amin'ny voaroy miharo soda, rano, ary indraindray mamy. Ny kininina no zava-pisotro voalohany nampivondrona ny vehivavy sy ny lehilahy tao amin'ny trano fisotroana manerana an'i Angletera. Ny antony dia ny haavon'ny alikaola avo lenta, mahatonga ny fanakanana rehetra hanjavona.
ankehitriny, Ny Gin dia afangaro amin'ny akora isan-karazany: mint, voasarimakirana natsatsika, peppercorns, ary voasary mena mena. Satria mpisotro toaka be i Gin, ho mamo haingana kokoa noho ny hafainganan'ny hazavana ianao. Noho izany, torohevitra hatrany ny fanatrehana fisotroana anaty vondrona. Amin'ity fomba ity dia voaro amin'ny iray ianao scam amin'ny fitsangatsanganana lehibe hialana amin'izao tontolo izao, toy ny olona sariaka ao an-toerana izay miery.
5. Becherovka Repoblika Tseky
Ny alikaola malaza an'ny Repoblika Czech dia labiera. Ny labiera dia mora vidy kokoa noho ny rano any Czechia, ary tsy maro no mahalala fa ny zava-pisotro misy alikaola dia ny Becherovska. Marina izany, ny fisotroana alikaola be zava-mahadomelina Becherovska dia malaza amin'ny ririnina. Ity zava-pisotro ity dia misy mihoatra ny 20 karazana anana, Voasarimakirana kanelina, afangaro amin'ny ranom-boasary na mananasy. Izany dia vokatry ny tsiro mahery vaika, ary mazava ho azy ny 38% alikaola.
Ny toerana tsara indrindra hanandramana an'i Becherovska dia ao amin'ny Becher's Bar. Ity bara milamina ity dia nomena ny anarana avy amin'i Josef Vitus Becher, izay nanova ny zava-pisotro misy alikaola avy amin'ny fanafody fandevonan-kanina, ao anaty zava-pisotro mangidy dia androany, miverina 1807.
6. Pimm's Cup Fanjakana Mitambatra
Manatreha fampisehoana voninkazo isan-taona any Wimbledon na Chelsea amin'ny fialantsasatrao amin'ny teny anglisy? Mety hisotro mihoatra ny 1 kaopy Pimm. Pimms no zava-pisotro farany fahavaratra amin'ny hetsika fahavaratra any Angletera, hanitra, iced, ary nanompo tamin'ny voankazo, tonga lafatra amin'ny andro fahavaratra mafana.
Na izany aza, aza diso hevitra ity fisotroana voankazo ity dia ho totohondry mahafinaritra fotsiny, satria misy tokoa io 25% alikaola. Ankoatry ny, Ny pimms dia miorina amin'ny gin izay manampy ny haavon'ny alikaola ao aminy, ka mety tsy ho hitanao akory ny fomba 1-2 zava-pisotro no manome anao mihoatra ny tipsy amin'ny hetsika Britanika fahavaratra lehibe indrindra.
7. Misotro toaka hanandrana manerantany amin'ny ririnina: Gluhwein
Ny fotoana Krismasy dia iray amin'ireo fotoana tsara indrindra fivezivezena any Eropa, ary Noely tsena no mahasarika indrindra. Gluhwein dia divay misolelaka mahatalanjona, ary azonao atao ny manandrana azy amin'ny tsena krismasy any Alemana, Aotrisy, ary Soisa, araho fotsiny ireo vahoaka faly.
Tsy toy ny divay mena, Mamy kokoa i Gluhwein, afangaro amin'ny citrus, zava-manitra, ary kanelina. Ankoatry ny, hovidinao mafana izy, koa hanome anao fialan-tsasatra mamy sy mampionona ianao rehefa mandehandeha amin'ny ririnina eropeana mangatsiaka. Mifanohitra amin'ny zava-pisotro mangatsiaka, Schnaps dia safidy tsara amin'ny zava-pisotro misy alikaola misy tsiro hanandrana rehefa any Eropa.
8. Zava-pisotro misy alikaola hanandrana any Shina: Toaka Maotai
Ny zava-pisotro misy alikaom-pirenena Sinoa Maotai dia novokarina tany amin'ny faritanin'i Guizhou. Maotai no novokarina voalohany nandritra ny tarana-mpanjaka Ming tamin'ny taonjato faha-16. Ity zava-pisotro sinoa misy alikaola ity dia tsy maintsy andramana, vita amin'ny voa mandritra ny taona vitsivitsy mandra-pahatongan'ity fifangaroana ity mba hahafahan'ny rivotra misento tsara..
Noho izany, raha toa ianao ka mandeha any Sina, dia andramo tokoa ity fisotroana Maotami tokana ity. Ny tsara indrindra dia ny fanandramana azy 20-25 mari-pana degre, anaty vera manokana miendrika tulip. Io dia hahafahanao manandrana ny hanitra manitra sy mifantoka amin'ity zava-pisotro toaka sinoa miendrika saosy ity.
Afaka manandrana an'ity pomace matsiro ity ianao – ny marika voaloboka dia malaza any Italia Avaratra, Soisa, ary San Marino. Mandritra ny fisotroanao an'i Aperol amin'ny atoandro, ny grappa dia fisotroana aorian'ny sakafo hariva, mba hanampiana handevona ny paty mavesatra na ny sakafo pizza. Ary noho izany, Tsy toy ny divay mahazatra no hisotroanao amin'ny vera feno divay, ny grappa dia ho tonga amin'ny vera kely an'ny 1-2 ounces.
Ankoatry ny, afaka manandrana an'i Grappa miaraka amin'ny espresso fohy ianao, na koa manandrana azy afangaro amin'ny cocktails, na izany na tsia, hahafinaritra anao ny manandrana misotro zava-pisotro mahamamo italiana malaza ity, ary tokony apetaka amin'ny sakafo sy zava-pisotro tsy maintsy andramenao any Italia.
10. Jenever Belzika
Ny zava-pisotro tranainy indrindra any Eropa, Jenever no niandohan'i Gin. Na izany aza, ankehitriny ireo zava-pisotro roa ireo dia zava-pisotro misy alikaola roa tena miavaka. Rehefa any Belzika ianao dia afaka manandrana ilay antitra sy tanora Genever, ny Gen Gen ho aperitif, raha ny Gen taloha aorian'ny sakafo hariva kosa dia digestive.
Ny Jenever dia fanahin'i Belzika mihoatra ny 500 taona. Betsaka ny mandeha any Belzika miaraka amin'ny tanjona hanandrana labiera belza tsara indrindra. Na izany aza, Jenever no zava-pisotro misy alikaola mahazatra any Belzika. Raha te-hahatadidy ny Jenezy Belzika ianao ho fahatsiarovana, tadiavo ilay tavoahangy vita amin'ny tanimanga, ireo siny famantarana an-tànana mitazona ity alikaola mahavariana ity.
Luxembourg mankany Bruxelles miaraka amina lamasinina
Antwerp mankany Bruxelles miaraka amina lamasinina
Amsterdam mankany Bruxelles miaraka amina lamasinina
Paris mankany Bruxelles miaraka amina lamasinina
eto amin'ny Save A Train, faly izahay manampy anao amin'ny famolavolana ny fialan-tsasatrao manerantany. Ny bara tsara indrindra, Pubs, ary teboka hanandramana ireo 10 Ny zava-pisotro misy alikaola eran'izao tontolo izao dia dia lavitra.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “zava-pisotro misy alikaola 10 hanandrana izao tontolo izao” ve ianao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Falcohol-drinks-worldwide%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#zava-pisotro Alcohol AlcoholDrinks AlcoholDrinksWorldwide PopularAlcoholDrinks